အမွှေစိန် သားနှစ်ယောက်ကြားက Britney Spears ရဲ့ ဖြစ်ပုံတွေ…
On July 2, 2018 July 2, 2018 By Aminnyar
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့တုန်းက Britney Spears ရဲ့ Instagram ပေါ်မှာ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခု တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာကတော့ ၁၁ နှစ်သားအရွယ် Jayden ဟာ သူ့အမေဖြစ်တဲ့ Britney ရဲ့ ဖုန်းကို ခဏခိုးယူပြီး …
“ကျွန်တော် အမေ့ဖုန်းကို ခဏခိုးထားတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကိုလန့်အောင် လုပ်ပြမယ် ကြည့်နေ” လို့ ခပ်တိုးတိုး ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ အဝတ်လဲခန်းမှာ တစ်ယောက်တည်း ရှိနေပုံရတဲ့ Britney ကို အကျယ်ကြီးလှမ်းအော်ပြီး ခြောက်လန့်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ Britney ဟာ ပထမတော့ လန့်ပြီးအော်လိုက်ပေမယ့် နောက်တော့ ဟန်ကိုယ်ဖို့ဆိုသလို ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြုံးတုံ့တုံ့လုပ်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့သားလေးရှိရာ လျှောက်လာရင်း… “ဒါနောက်စရာ မဟုတ်ဘူးနော် Jayden” … လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ Britney အတွက် သားတွေနောက်တာကို အခုလို ခံရတာဟာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Instagram ပေါ်မှာ မြင်ရသမျှကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ မေလထဲမှာတုန်းကလည်း တစ်ခါတွေ့ရပါသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက Britney ဟာ မီးဖိုထဲမှာ ဟင်းချက်နေတုန်း Jayden က ခုလိုပဲ လှမ်းအော်ပြီးနောက်တာပါ။ Britney ကလည်း လန့်ဖြတ်ပြီး ထအော်တာပါပဲ။
သားအငယ်ဖြစ်တဲ့ Jayden က အဲဒီလို အစသန်သလို အကြီးကောင်ဖြစ်တဲ့ ၁၂ နှစ်အရွယ် Sean ကလည်း မခေပါဘူး။ Jayden လိုပဲ သူ့အမေရဲ့ ဖုန်းကိုခိုးယူပြီး လန့်သွားအောင်စတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကို ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလ လောက်တုန်းက Britney ရဲ့ Instagram ပေါ်မှာ တွေ့ခဲ့ရဖူးပါသေးတယ်။ အဲဒီထဲမှာဆိုရင် Britney ဟာ သူ့သားကြီးရဲ့ စူးစူးဝါးဝါး အော်ဟစ်ခြောက်လှန့်မှုကြောင့် ငယ်သံပါအောင်လန့်အော်ရင်း လဲတောင် ကျသွားခဲ့သေးတာပါပဲ။ အဲဒီတော့ Instagram ပေါ်မှာတောင် ဒီလို ဗီဒီယိုလေးတွေကို တွေ့တွေ့နေရတယ်ဆိုရင် အပြင်လောကမှာဆို Britney ဟာ သားနှစ်ယောက်နဲ့ ဘယ်လိုနေမလဲ။ သေချာတာကတော့ သားနှစ်ယောက်ရဲ့ ဗရုတ်ကျမှုတွေအောက်မှာ Britney ဟာ ခုလိုပဲ ခဏခဏ အငိုက်မိသွားရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Britney ကလည်း မခေဘူးလို့ သိရပါတယ်။ သူမကလည်း အခွင့်သာရင် သားတွေကို အလစ်ချောင်းလို့ ခုလိုပဲပြန်ပြီး စနောက်တတ်ပါတယ်တဲ့။ သူတို့ သားအမိသုံးယောက်ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချောင်းမြောင်းပြီး ခုလိုတွေ မလုပ်ကြံကြဘူးဆိုရင်တော့ အတူတူ ကစားလေ့၊ စားလေ့ ရှိကြတယ်ဆိုတာကို Instagram ပေါ်မှာ Britney တင်တဲ့ ပုံလေးတွေ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကနေတစ်ဆင့် တစ်စေ့တစောင်း အကဲခတ် သိနိုင်ပါတယ်။
I think he knew it was coming ?????
A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jun 26, 2018 at 10:13am PDT
Britney ဟာ သူမရဲ့ သားလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sean နဲ့ Jayden တို့ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ပြန်ကွာရှင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်း Kevin Federline နဲ့ ရခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ အသက် ၃၆ နှစ် ပြည့်သွားခဲ့ဖြစ်တဲ့ Britney ဟာ ချစ်သူဘာညာတွေလောက်သာ ထားဖြစ်ရုံကလွဲပြီး နောက်ထပ် အိမ်ထောင်တွေဘာတွေ ထပ်မပြုသေးဘဲ ဒီသားလေးနှစ်ယောက်နဲ့သာ ပျော်ပျော်ပါးပါး နေနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jun 4, 2018 at 2:58pm PDT
တကယ်တော့ Britney ဟာ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်အစပိုင်းလောက်မှာ ရောက်ရှိလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ Baby One More Time, Opps ! … I Did It Again, Crazy (You Drive Me) စတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ တဟုန်ထိုး နာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီး၊ အနုပညာ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဂရမ်မီဆု၊ Billboard Music Award ဆု၊ MTV Video Music Award ဆု စတာတွေကို အကြိမ်ကြိမ်ရရှိထားခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်ဆိုတာကို အထူးတလည် ပြောပြနေဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ ထင်မိတာပါတယ်နော်။ ။
PREVIOUS POST Previous post: လေးနာရီ အတွင်း ကြည့်ရှုသူ 5.4M ကျော်သွားခဲ့တဲ့ XXXTENTATION ရဲ့ SAD! Music Video
NEXT POST Next post: Offset နဲ့ မစေ့စပ်ခင်ကတည်းက တိတ်တဆိတ်လက်ထပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်လို့ ဖွင့်ပြောလာခဲ့တဲ့ Cardi B